Bloomwell Group dia mahazo famatsiam-bola lehibe indrindra amin'ny tsena rongony eropeana
Home » Lahatsoratra farany farany » Tsindrio eto raha ity ny fanambaranao an-gazety! » Bloomwell Group dia mahazo famatsiam-bola lehibe indrindra amin'ny tsena rongony eropeana
Oktobra 18, 2021
Ny Bloomwell Group dia nanidy tamim-pahombiazana ny famatsiana famatsiam-bola 10 tapitrisa dolara mahery - ny famatsiam-bola be indrindra fantatra ho an'ny orinasa rongony eropeana hatreto. Ny mpamatsy vola voalohany dia ny mpamatsy vola amin'ny fitomboan'i Etazonia, Measure 8 Venture Partners, manampahaizana manokana amin'ny fampiasam-bola amin'ny indostria rongony. Anisan'ireo mpamatsy vola hafa, ny anjely mpandraharaha Dr. Reinhard Meier dia manambola indray amin'ny alàlan'ny tahirin'ny Venture Capital Investors; ary Andriamatoa Weber an'ny FPS dia mpanolotsaina ara-dalàna an'i Bloomwell.
Ny Bloomwell Group dia nanidy tamim-pahombiazana ny famatsiana famatsiam-bola 10 tapitrisa dolara mahery-ny fampiasam-bola masomboly fanta-daza indrindra ho an'ny orinasa rongony eropeana hatreto. Ny mpamatsy vola voalohany dia ny mpamatsy vola amin'ny fitomboan'i Etazonia, Measure 8 Venture Partners, manampahaizana manokana amin'ny fampiasam-bola amin'ny indostria rongony. Anisan'ireo mpamatsy vola hafa, ny anjely mpandraharaha Dr. Reinhard Meier dia manambola indray amin'ny alàlan'ny tahirin'ny Venture Capital Investors; ary Andriamatoa Weber an'ny FPS dia mpanolotsaina ara-dalàna an'i Bloomwell.
Mifanindran-dàlana amin'ilay fanambarana, ny Bloomwell Group, izay misy an'i Algea Care, orinasan-telefaona eran-tany an'ny rongony rongony ho an'ny rongony ara-pahasalamana eo amin'ny laharan'ny marary, dia mametraka indray ny tenany ho orinasa mitazona, mamela azy hanangana, hampiasa vola na hividy orinasa rongony.
"Miaraka amin'ny Bloomwell, manatsara ny fahasalamana izahay amin'ny alàlan'ny digitalisation sy ny mety ho rongony rongony ary koa fanafody voajanahary hafa. Ny orinasan-tsofinay dia hifantoka tanteraka amin'ny fomba fampiasa centric ho an'ny mpanjifa hatrany amin'ny rongony rongony ara-pahasalamana, ankoatry ny fambolena. Manomboka izao ny vanim-potoanan'ny fitsaboana voajanahary ary Bloomwell no mitarika, "hoy i Niklas Kouparanis, CEO & mpiara-manorina ny Bloomwell Group.
Tao anatin'ny herintaona, Bloomwell Group dia nitombo ho 160 ny mpiasa, miaraka amin'ny tombam-bidiny dimy tapitrisa euro amin'ny 2021. Ho fanampin'ny Niklas Kouparanis, CEO, mpandraharaha ary mpisava lalana rongony, ny birao dia nohamafisin'ilay Dr. veterin Reinhard Meier, izay mpanorina. nitarika an'i Teleclinic tamina fivoahana, mpiara-manorina Samuel Menghistu ary Boris Jordan, mpiara-miasa mpanorina ny Measure 8 Venture Partners.
Ny tabilao vita dia manarona endrika amin'ny fitsaboana, nomerika, rongony, fampiasam-bola ary fananganana marika amin'ny sehatry ny tsena isan-karazany.
Dr. Reinhard Meier, Talen'ny Radiology ao amin'ny Westpfalz Klinikum, izay nanorina sy nanambola tamin'ny orinasa mpitsabo maro ary koa nanangana vola VC marobe.
Boris Jordan, Miaraka amin'ny fahazoana $ 285M an'ny EMMAC, Curaleaf no MSO voalohany sy tokana manana fisiana manan-danja any Eropa. I Jordania dia raisina ho iray amin'ireo manam-pahaizana manokana momba ny rongony malaza any Amerika Avaratra ary tompon'andraikitra tamin'ny asan'ny Curaleaf, orinasa rongony eran-tany amidy ampahibemaso, ary koa fampiasam-bola amin'ny sehatry ny rongony ao amin'ny Measure 8 Ventures.
Niklas Kouparanis, mpandraharaha serial, ary mpisava lalana amin'ny sehatry ny rongony rongony Euopean.
Samuel Menghistu, mitarika ny fihaonan'ny banky, fampiasam-bola, fifanakalozana M&A ary IPO mandritra ny enin-taona mahery.
"Betsaka ny fanantenana andrasan'ny mpampiasa vola sy ny orinasa manerantany ao amin'ny indostrian'ny rongony eropeana dia tsy tanteraka hatramin'ny nananganana ny 'Cannabis Law' tamin'ny martsa 2017, na dia nitombo tsy an-kijanona aza ny tsena. Miaraka amin'ny Bloomwell, nasehonay tao anatin'ny herintaona monja ny zavatra azo tratrarina amin'ny alàlan'ny fahadiovam-pandraharahana. Ny indostrian'ny rongony eropeana vao misondrotra dia feno ny mety ho fampandrosoana an'i Bloomwell amin'ny ho avy. Raha manamafy ny tsena any an-toeran-kafa, ny famantarana rehetra dia manondro ny fitomboana sy ny fanitarana amin'ny alàlan'ny fifangaroan'ny rongony, fanavaozana, fanaovana dizitaly ary fomba D2C radika na fomba fiasa mivantana amin'ny marary ", hoy i Anna-Sophia Kouparanis, mpiara-manorina ny Bloomwell Group.
"Alemana no tsena eropeana mitarika rongony ara-pahasalamana ary ny Bloomwell Group dia nanaporofo tao anatin'ny herintaona fa afaka mamantatra sy mandanjalanja vahaolana vaovao amin'ity tsenan'ny fitomboana vaovao ity ho tombontsoan'ny marary. Ny Cannabis dia manana ho avy mamiratra any Eropa ary manantena ny hanohana sy hiara-hiasa amin'ny Bloomwell Group izahay raha manohy mivoatra, "hoy i Boris Jordan, mpiara-miasa mpanorina ny mpiara-miombon'antoka amin'ny fepetra 8 ary ny filohan'ny mpanatanteraka ao Curaleaf.
"Ny fanaovana nomerika no lakilen'ny fametrahana ny marary amin'ny ivon'ny rafi-pitsaboana tsy mahomby. Algea Care, orinasa portfolio an'ny Bloomwell, dia efa nanaporofo fa manana ny fahaizany sy ny fitafiany hanatsarana ny fiainana ara-pahasalamana sy andavanandron'ireo marary an'arivony amin'ny sehatra voafehy be amin'ny alàlan'ny rongony ara-pitsaboana sy ny nomerika ary koa fenitra serivisy avo lenta tokoa. », Hoy ny Dr. Reinhard Meier.
Shina hanao ny famindrana angon-drakitra ivelan'ny firenena ho resaka...
Ny fanohizana ny fizahantany an-tanàn-dehibe Eoropeana dia hetsika henjana amin'ny...
Maorisy dia namarana ny quarantine ho an'ireo mpizahatany nofafazana ...
Nahazo ny loka Nobel ho an'ny ...
WTM Africa Mandova ny Africa Travel & fizahantany Vaovao ...
Destination Mekong mpiara-miombon'antoka vaovao amin'ny Glasgow...
Ireo mpandraharaha Ogandà Grasshopper dia tsy azo inoana ho tsy tonga...
Vokatra fampiroboroboana ny firaisana ara-nofo tsy nahazoana alalana n ...
Ny minisitra Bartlett dia nitodika tany amin'ny jeneraly UNWTO manan-danja ...
Tanàna 10 tsara indrindra ho an'ny fiainam-pianaran'ny mpianatra manerantany
Sandals and Beaches Resorts Nahazo Gazety 13 Diving Vaovao...
Inona no Vaovao any Bahamas tamin'ny Novambra
Porofon'ny fanaovana vaksiny izao dia tsy maintsy miditra amin'ny VIA Rail...
Ny Fizahantany Vaovao any Torkia dia mifantoka amin'ny fampakaram-bady
Ny IMEX no mitarika ny fivoriana eropeana sy ...
Ny Minisitry ny Fahasalamana any Canada dia nanambara ny vaovao momba ny…
Nampiditra sary iray vaovao i Afrika Atsinanana...
Ticket sidina maimaimpoana: Ontario mankany Reno-Tahoe
Zara raha misy Dadabe Noely any Etazonia amin'izao vanim-potoanan'ny Krismasy izao
Ny Birao Afrikana momba ny fizahantany dia manaiky an'i Costa Rica ho...
Sidina Hawaii vaovao avy any Seattle, San Francisco ary Los...
Private Resort dia manome $ 2 tapitrisa any Karaiba sy Azia
Taorian'ny 20 taona nanaovana fanadihadiana FBI dia ...
IATO dia mandray ny fiverenan'ny sidina iraisam-pirenena...
Fisaorana dia antenaina hiakatra ho 20 tapitrisa...
Namoaka ny voalohany eran-tany ny Tourist Journey...
Aiza ary oviana no manao VIP ambony amin'ny tsenan'ny fitsangatsanganana eran-tany...
Taiwan Miomana amin'ny fahatongavan'ny rivodoza mahery Chanthu
JA Solar dia manome jiro maitso ho an'ny lalao ho avy...
Tsy misy ny maty: horohoron-tany mahery tany Gresy ...
Qatar Airways dia nampiato avy hatrany ny sidina tamin'ny dimy...
Fijery ao ambadiky ny sehatra mahatalanjon'ny IMEX maharitra...
Ny ITA Airways dia nametraka baiko ho an'ny fiaramanidina Airbus 28 vaovao
Nampidirina tao amin'ny fivoriamben'ny UNWTO tamin'ny...
Fisokafan'i Etazonia: Vaksina feno ary COVID-19 ratsy ...
Fihaonambe G20 Roma: famaranana ny valan-dresaka ho an'ny mpanao gazety ny 31...
Colitis Ulcerative: Natolotra ny fitsaboana vaovao...